စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 4/11/2010 09:00:00 PM
သိပ်ပေါ်လွင်တာပဲ၊ ကျွန်မရော၊ အဖွားအိုရောကို တွေ့နေရတယ်။
ဖက်လှဲတကင်းယဉ်ကျေးမူ ကိုယ့်ဆီမှာလည်း မရှိဘူး၊ လိုအပ်တယ်နော်၊
အမေက ကိုယ်ဘွဲ့ယူတော့ ပါးပြင်လေး လာနမ်းတာတောင် ကိုယ့်မှာ အနေရခက်ခဲ့တာ။
ရေးရင်းနဲ့ ပိုစ့်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားတော့မယ်။ :)
11/4/10 11:13 AM
11/4/10 12:34 PM
အနှစ်သာရ ပြည့်ဝတဲ့ စာစုလေးကို ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးပါ မမယ်ကိုးရေ...။ ဖတ်နေရင်းနဲ့ ခံစားလို့ ရလာတယ်လေ။
ဟုတ်တယ် ညီမရေ အမတို့ဆီမှာ အဲလိုယဉ်ကျေးမူမျိုး မလေ့တော့ ပွေ့ဖက်အားပေးရမှာ ခပ်ကြောင်ကြောင် ရယ်။ အမ အဖေဆုံးတယ်ကြားတော့ သူဋ္ဌေးက စကား လာပြောရင်း သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲပွေ့လိုက်တာ လူတောင် ကြောင်အအ ဖြစ်သွားတယ်...:)
စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့အချိန်မှာ အားပေးတဲ့အနေနဲ့ ဖက်တာ
တကယ်ပဲ သက်သာတယ်။ တို့ကိုလဲ "တစ်ဖက်' လောက် နော် ညီမ။
ကြင်နာတတ်တဲ့ မယ်ကိုးလေးရယ်.. ရေးပုံလေးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ.။
အစ်မလည်း အခုတလောပင်ပန်းလွန်းလို့ ချိနဲ့နေတယ်။ မယ်ကိုးရဲ့ free hug အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါတယ်။ Please Pleaseး)
“နှစ်သိမ့်မှုကို ခံယူခြင်းထက် နှစ်သိမ့်မှုကို ပေးနိုင်ရန်...
ယုယမှုကို ခံယူခြင်းထက် ယုယမှုကို ပေးနိုင်ရန်..
ချစ်ခြင်းကို ခံယူခြင်းထက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို.. ပေးအပ်နိုင်ရန်...
လူတိုင်း မေတ္တာတရားတွေနဲ့ နွေးထွေးစွာ ပွေ့ဖက်နိုင်ကြပါစေ..
မမမွန်...မလေးလသာည ရေ မယ်တို့ group hug ကြရအောင်နော်။ မယ်အပါအဝင် အားလုံးချိနဲ့သူတွေမို့ ပွေ့ဖက်ပြီးကြရင် နှလုံးသားတွေ နွေးထွေးကြံ့ခိုင်လာကြမှာ အသေအချာနော်း)
ွGROUP HUG ;)
စာလာဖတ်တဲ့ ဆရာမအပြုံးပန်း၊ကာတွန်းရုပ်လေး၊လင်းခေတ်ဒီနို၊အစ်မ ဒဏ္ဍာရီ၊အစ်မ ချစ်ကြည်အေး၊အစ်ကို ရင်နော် အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးပါတယ်ရှင်း))
11/4/10 6:27 PM
ဘယ်လိုပြောမလည်းဗျာ ဆွေးမြေ့ မြေ့ ကြီးဖြစ်သွား
ရတယ် . . . နောင်လာမဲ့အနာဂါတ်မှာတော့
နွေးထွေးတဲ့ ရင်ခွင်မှာ နှစ်သိမ့်ကြင်နာတဲ့ထွေးပွေ့ မှုတွေ
ခိုနားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်းနဲ့. . .
အမ ညီမလေးကို BIG HUG အကြာကြီး ပေးလိုက်တယ်.. နော်။
11/4/10 9:16 PM
မမမယ်ကိုးရေ...ပို့ စ်လေးက ကောင်းလိုက်တာ...၀မ်းနည်းနေတဲ့ အချိန် အားငယ်နေတဲ့ အချိန်..အထီးကျန်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ...တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ပွေ့ ဖက်ခြင်းကို ခံလိုက်ရရင်...အားကိုးရာ တံတိုင်းတစ်ခုလို မှီတွယ်လို့ မျက်ရည်တွေ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက် ကျခဲ့ဖူးတယ်...နွေးထွေးမှုတွေ ကူးစက်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတယ်...ကြင်နာစွာ ယုယမှုတွေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ထုံမွှန်းပါစေ...
12/4/10 10:17 AM
Australia မှာလည်း အဲလို Free Hugs တွေ မကြာခဏ တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေက သူတို့ကို ရယ်သွား ကြတာပဲ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ခု မယ်ပြောသလိုလေး အားလုံး နားလည်ခံစားတတ်ကြရင် ကောင်းမယ်နော် ဘယ်လိုများ ရှင်းပြရပါ့ .......
ဖတ်ပြီး မြင်ယောင်သွားမိတယ် အစ်မး))
လူသားတိုင်း အထီးကျန်ခြင်းက ကင်းဝေးနိုင်ပါစေ ..း)
12/4/10 10:28 PM
ဖက်တာမဖက်တာထက် ... လူ့အသိုင်းက လူတိုင်းကို
ချစ်နေတဲ့လူတွေ၊ တန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေဖြစ်နေရင် သိပ်ကောင်းတာပေါ့။
You Tube ကနေ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က Free Hugs campaign တွေပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ အရင်က ကိုးရီးယားကဟာတော့ကြည့်ဖူးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်က ...။
အထူးသဖြင့် လူတွေမှာ ကိုယ့်ကို မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူတွေ ရှိနေသေးပါလားဆိုတာ ခံစားရဖို့လိုတယ်။
Singapore မှာ Free Hugs Campaign လုပ်တဲ့အခါသာ အကြောင်းကြားလိုက်ပါ။
We all are bro and sis ...
ကိုရင့် စာသား ကြိုက်လွန်းလို့..
မယ့်စာ နဲ့လဲ လိုက်လွန်းလို့...
ကိုရင် နဲ့ တူတူပဲ မန့်လိုက်တယ်..။
Free Hug ကတော့ လိုချင်တဲ့သူ လာယူစေ...
မေတ္တာတွေ အပြည့်ထည့်ထားတဲ့ မိုးကုတ်သား ရင်ခွင်ကြီး ရှိတယ်.....
မယ့်ကို စနေတာနဲ့ မယ့်စာ ရသလေး ပျက်တော့မယ်...
မယ်ရေးထားတဲ့ ခုပို့စ်လေးကို သိပ်ကြိုက်တယ်။
(အကို ရေးထားဖြစ်တဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ် လဲ ပို့ပေးလိုက်မယ်....။)
14/4/10 5:04 PM
ဗမာမလေးတွေနဲ့တွေ့မှသာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ပြန်ပြီး အတောသပ်နေရတာရယ်...
19/4/10 1:44 AM
ကောင်းတယ်ညီမရေ..ယဉ်ကျေးမှုအရပဲဖြစ်ဖြစ် ယဉ်ကျေးမှုမရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တဦးနဲ့တယောက်တကယ်ချစ်ခြင်းနဲ့ပွေ့ဖက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ ပိုနားလည်သွားပါတယ်.ကိုချစ်ဖေတခါ အလုပ်ကပြောင်းမယ်ဆိုတော့ လာလာဖက်ပြီးနုတ်ဆက်ကြတာ အံ့တွေအောရကော အော နောက်မှ ဂလိုကိုး..လို့သဘောပေါက်သွားတယ်.ရွှတ်ကနဲတောင် အာဘွားပေးသွားသေး.သူငယ်ချင်းဆိုတာလဲ ဂလိုလဲရှိသကိုးလို့ ကိုယ်တို့ဗမာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆို တယ်....လို့ပြောခံရမှာ.တကယ်ပဲကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေတောင် ချစ်ခင်မှုနဲ့ပွတ်သတ်ပေးရင်တောင် သဘောကြလို့..လူတွေပဲနော..ပိုရှိသင့်ပါရဲ့..
ဟုတ်တယ်... အဲဒီ နွေးထွေးမှုကို ကျင့်ယူတတ်ရမယ်။ စစ်မှန်တဲ့ ရင်ထဲက ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပေးတတ်တဲ့ နွေးထွေးမှုမျိုး.. တကယ်ကိုလိုအပ်တာ......